Izindaba ezi-5 zemibhalo ngesizungu | Bezzia
Izindaba ezi-5 zemibhalo mayelana nesizungu
UMaria vazquez | 09/09/2021 12:00 | Cultura
Ekwindla yisizini ekumema ukuthi ufunde. Ngemuva kokuphila okumatasa kwezenhlalo ehlobo nobuthakathaka obubangelwa amazinga okushisa aphakeme, abafundi bathola ekwindla isikhathi esikahle sokucwiliswa ekufundeni okusondele kakhulu nokuncibilikisa. Futhi, abashicileli baphinde babuyele enkambisweni yabo ejwayelekile ngalesi sikhathi futhi babe nezinto ezintsha zokubhala.
Ukuzulazula kufayela le- izinhlu zabashicileli, Siqoqe izincwadi ezintsha ezinhlanu lapho abalingiswa, ngezizathu ezihlukile, bephila isikhathi sokuba nesizungu. Ukufundwa esikholelwa ukuthi kufanelekile ngalesi sikhathi sonyaka futhi okushicilelwe noma okuzoshicilelwa kuyo yonke le nyanga kaSepthemba.
1 Isiqhingi Sokukhohlisa
2 I-Quartet yokuwa
4 Owesifazane namakati amabili
Umbhali: UPaulina Flores
Umshicileli: Seix Barral
Ngemuva kokuyeka umsebenzi owuzondayo, UMarcela ubalekela impilo yakhe eSantiago de Chile eyovakashela ubaba wakhe ePunta Arenas, ePatagonia. Lapho uthola ukuthi uMiguel, anobudlelwano obuyinkimbinkimbi naye, ufihle insizwa yaseKorea esindiswe iqembu labadobi olwandle. Uhlukaniswe ngemuva kodonga lokuthula nendaba ehlukumezayo, uLee uyimfihlakalo yokuqaqa, osindile lapho bobabili baphendukela ekugwemeni ukuxazulula ukungaboni ngaso linye kwabo.
Kukhuthazwe ngamacala wangempela amatilosi asempumalanga abeka izimpilo zawo engozini ngokugxuma emikhunjini yefektri edabula iStrait of Magellan, Isiqhingi saseDeception sitshela ababaleki abathathu ngifuna isiphephelo ungapheli amandla. Ekhuluma ngesimo samanje sokuxhashazwa kwezilwandle nezimo zokusebenza ezingacabangi ngekhulu le-XXI, le noveli yeqa umngcele weqiniso ukufika ogwini olusha, lapho isizungu, amaphutha nokuphelelwa ithemba kusengaba yinto ejabulisayo.
Kubhalwe ngesigqi se-cinema Indlalifa ye-cinema yaseKorea, njengenkondlo enodlame, u-Isla Decepción uyincwadi yokuqala elindelwe nguPaulina Flores, owina umklomelo kaRoberto Bolaño, okhethwe nguGranta njengomunye wababalisi abahamba phambili eSpain nencwadi yakhe yokuqala, Qué shame , idunyiswe ngazwilinye ngabagxeki futhi yahunyushwa emhlabeni wonke.
Umbhali: UBarbara pym
Umshicileli: Gatopardo ediciones
UBarbara Pym ubhale i-Autumn Quartet ngaphandle kwethemba elikhulu lokuthi lizobona ukukhanya kosuku. Yayingakashicilelwa isikhathi eside, kubhekwa abahleli bayo ukuthi yayigxiliswe enkambisweni edliwe ngamabhu futhi encane kwezentengiselwano. Ngemuva kokuthi imbongi uPhilip Larkin kanye nomgxeki uLord David Cecil bethathe ukubaluleka kwabo, uPym uthole umshicileli wale ncwadi, okuvele ukuthi Umncintiswano wokugcina weBooker ngo-1977 futhi yamfaka njengomunye wababhali abangamaNgisi abafundeka kakhulu nabathandwayo bekhulu lama-XNUMX.
Abalingiswa abaphambili bale noveli basebenza ehhovisi elifanayo futhi babhekene nekwindla yempilo yabo bexakwe wedwa. ULetty uzothatha umhlalaphansi engalutholanga uthando. UMarcia unomlingiswa ozimele futhi onamahloni, izimfanelo eziye zagcizelelwa kusukela athola i-mastectomy. U-Edwin ungumfelwa othanda ukuya emikhosini yenkolo, noNorman uyi-misanthrope ethanda ukubhuqa. Bonke bahlala belengisiwe phakathi kwezinkumbulo zabo zempi, isipho abangasiqondi - iLondon of rock and roll kanye ne-miniskirt - nekusasa elimnyama. Bonke bayaphikelela, noma kunjalo, ekutholeni ithemba emphakathini obafulathela noma obazwelayo.
Umbhali: UCarlota Gurt
Umshicileli: Izincwadi ze-Asteroid
Usuku lokushicilelwa: 13/09/2021
UMei, owesifazane oneminyaka engamashumi amane nambili ubudala Egxile emshadweni ongenandaba futhi osanda kuxoshwa emsebenzini, unquma ukuyocasha endlini akhulele kuyo, indlu encane epulazini maphakathi nehlathi. Lapho uzozama ukubhala inoveli ebimkhathaze iminyaka eminingi ngenkathi ebhekene nesikhathi sakhe esedlule, isipho esingesihle kanye nekusasa elizayo.
Le noveli ingumlando wokuhlubuka, indaba yesizungu esingaphenduki ilandiswa ekubaleni phansi kwezinsuku eziyi-185. Siyini isizungu? Iqiniso elifanele noma isimo sengqondo, isibusiso noma ukulahlwa? Okuwukuphela kwento eqinisekile ukuthi awusoze waphuma wedwa ngaphandle kokulimala.
Owesifazane namakati amabili
Umbhali: U-Ayanta Barilli
Umshicileli: I-Planeta Yokuhlela
Usuku lokushicilelwa: 22/09/2021
I-protagonist, umbhalo wombhali uqobo, ulandisa futhi ulandise isikhathi sesizungu, okumakwe ukwahlukana okunemizwa nokuhamba kwezingane zakhe, ngamunye eya endaweni abangakwazi ukuyivakashela.
Ngalezi zinyanga, ehambisana namakati akhe amabili kuphela, ukubhala kuzoba ukuphela kwesenzo sokumelana kungenzeka lapho ubhekene nobunzima. Izobuyekeza izikhathi ezibalulekile zokuphila kwakhe, kubonakale ngombono ohlukile ophoqelekile, lapho owesifazane - oyindodakazi, umama nesithandwa sakhe - ezoba ngumqambimanga.
Ukungalaleli kuzoba ukukhanya okuzokhanyisa indlela yakho.
Author: UVictor Català
Usuku lokushicilelwa: 29/09/2021
"Isizungu sakhe sakhula sajiyiza ngomphefumulo wakhe njenge-polle gleba."
UMila, osanda kushada noMatias, indoda angayazi ishiya ikhaya layo imlandele iye endaweni eyikude ehleli entabeni emangelengele. Lapho efika, uzohlangana noGaietà, umalusi ovuthiwe, omomothekayo futhi ohlakaniphile, no-imanima, umshushisi oyingozi. Leso sungu esimangelengele nezidalwa ezihlala kuso kuholela uMila ekwenzeni uhambo lwangaphakathi engabuyi.
Isizungu, ubuciko bobuciko bezinhlamvu zesiCatalan, eshicilelwe ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, iyaqhubeka nokusebenza ngokumangalisayo kokuqukethwe nangendlela. Ngakho-ke isidingo salokhu kuhumusha, lapho imbongi kanye nomhumushi uNicole d'Amonville Alegría ehumusha ngokucophelela ngesiSpanishi ukunotha okwedlulele, ukuncipha kanye nezinkondlo ezihlala zikhona kuphrojethi kaCaterina Albert.
Ngokusobala asifundanga neyodwa yalezi zinto ezintsha ezifundwayo yize sinazo, ikakhulukazi, ezimbili emigwaqeni yethu. Kuthiwani ngawe? Yikuphi kwalezi zinto ezintsha ezibhaliwe ezikunaka kakhulu? Ingabe uyathanda ukufunda izindaba ezinjengalezi noma uthanda ukufundwa kwemfihlakalo noma enye elula futhi epholile?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » Cultura » Izindaba ezi-5 zemibhalo mayelana nesizungu
Izicabha zokuqala zokwamukela ekhaya lakho
Amathiphu ama-5 wokugcina izingubo nezicathulo zasehlobo